व्यवसायमा नोक्सानी र जागिरमा बाधा अड्चन छ ? यसो गर्नुस -
व्यवसायमा नोक्सानी र जागिरमा बाधा अड्चन छ ? यसो गर्नुस
प्रकाशित मिति : २०७७, ११ माघ आईतवार
व्यवसायमा लगातार नोक्सान र जागिरमा विभिन्न वाधा अड्चन या समस्या देखापरेको छ ? देखापरेको भए यी उपाय अपनाउन सकिन्छ ।
मिलमा गहुँ पिस्ने बेला तुलसीको सुकेको पात गहुँमा हालिदिने । एउटा रातो थैलीमा केशरका दुईवटा पात र गहुँ राखेर मन्दिरमा चढाउने र त्यो पिस्न राखेको गहुँमा मिसाउने । यसो गर्दा धनको प्राप्ति हुन्छ र लक्ष्मीको बास हुन्छ । ध्यान होस् की आटा सोमबार र शनिबार मात्रै पिस्नुपर्छ ।
जो व्यक्तिको लाखौ प्रयास गर्नेका बावजुद पनि घर बन्न सकेको छैन् भने उसले प्रत्येक शुक्रबार नियमित कोही भोका मानिसलाई खाना खुवाउनुपर्छ र आइतबार गाईको घिउ खुवाउनुपर्छ । यस्तो नियमित गरेमा अचल सम्पति बन्ने र पैतृक सम्पति प्राप्त गर्न सकिन्छ । यदि सम्भव छ भने बिहान नुहाइधुवाइ गरेर “ॐ पद्मावती पद्म कुशी वज्रवज्रांपुशी प्रतिब भवंति भवंति” मन्त्र जप गर्न सकिन्छ ।
शनिबार पिपलको पात ल्याएर धुप बती गरेपछि आफ्नो पसलको आफू बस्ने काठको मुनि राख्ने । सात शनिबारसम्म लगातार यस्तो गर्ने । काठमा सात वटा पात भएपपिछ त्यसलाई तलाउ वा कुवामा लगेर बगाइदिने । यसपछि व्यवसाय राम्रो हुनेछ ।
कोहीलाई आफ्नो पैसा सापटी दिएको छ र त्यो फिर्ता भएन भने एउटा सेतो कपडालाई २१ वटा टुक्रा बनाएर सापटी लाने व्यक्तिको घरको ढोकामा राखिदिने । यस्तो नियमित ४३ पटकसम्म गर्ने यसपछि तपाईको गुमेको धन या सापटी दिएको पैसा फिर्ता आउनेछ ।
‘नक्कली क्रान्तिकारीले जनतालाई भ्रममा पार्न खोजे’
ब्रान्डेड हेर्ने बानी छैन, धोती कुर्ता मेरो पहिचान हो !
आमा हुनु एउटा जिन्दगी सकेर अर्कै जिन्दगी बाँच्नु रहेछ
‘प्युबिक हेयर’ हटाउनुको कारण र नोक्सानी
यी ७ काम गर्नुहोस्, जसबाट क्षणभरमै बन्न सकिन्छ करोडपति
विद्रोही गमता, जसले गाउँमा छाउ भत्काएर चर्पी बनाइन्
आमाले एकैछिन बच्चा छाड्दा
क्याप्टेन विजय लामाको जीवन : ‘क्विक डिसिजन’ले म धेरै पटक जोगिएको छु
ज्योतिषिय विधि अनुसार यि हुन छोरा जन्माउने सजिलो उपाय